Masar oo erisay safiirka Turkiga ee Masar, una yeeratay safiirkooda Joogay Turkiga – idalenews.com
Masar oo erisay safiirka Turkiga ee Masar, una yeeratay safiirkooda Joogay Turkiga
Dowlada Masar ayaa u sheegtay safiirka Turkiga ee dalkaasi inuu dalka isaga baxo ka dib markii xiriirka labada dal bilihii ugu dambeeyey mid aad u liitay.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Masaarida ayaa ku eedeeyey Turkigu inuu faragalin joogto ah ku haayo arrimaha gudaha ee dalka Masar, waxaana xukuumada Masar ay ma hore u yeeratay safiirkooda u fadhiyey caasimada Turkiga ee Ankara. Turkiga ayaa dhankiisa sheegayin heerka eedeynta dalkiisa loo soo jeediyey waxba kama jiraan tahay.
Turkiga ayaa horey u cambaareeyey afgambigii military ee xilka looga tuuray madaxweynihii Masar Mohamed Morsi, waxay ku tilmaameen in aan la ogolaan karin xoog mililtary oo xukunka dalka Masar lagu qabsado taasoo dowlada Military taageero si aad ah uga careysiisey.
Dalka Masar ayaa khalalaase siyaasadeed ku jiray tan iyo bishii July oo xukuumadii islaamiyiinta xooga ku lahaayeen ee Madaxweyne Morsi la ridey tasoo keentay in kumaayaal taageerayaasha Morsi xabsiga loo taxaabo ka dib markii militarigu isku dayey inuu kala ergo taageerayaasha Morsi oo dalbanaayey in madaxweynaha Masar dib loo soo celiyo. Boqolaal qof ayaa sidoo kale ku dhimatey iska hor imaad taageerayaasha Morsi ay la galeen xoogaga amniga dalkaasi.
Turkiga ayaa cambaareeyey actions ama ficilada military Masar ku kaceen iyagoo ku tilmaamey actions aan loo dulqaadan karin, halka dowlada Masar iyaguna ku eedeeyey in Turkigu isku dayaayo in maslaxada dalkiisa iyo beesha caalamka iska horkeeno.
Gudoonka Barlamaanka oo go’aansadey kulanka ugu horeeya ee Barlamaanku kaga doodi doono Mooshinka loo qaadaayo R/W Saacid
Daawo: Dagaal Alshabaab & AMISOM ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Sh/Hoose